गोविन्द केसीका नाममा लोकतन्त्रलाई नै मार्ने ? « Naya Page
गोविन्द केसीका नाममा लोकतन्त्रलाई नै मार्ने ?
प्रकाशित मिति : 18 July, 2018 7:13 pm
२०७५ जेठ ३ गते नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को बीचमा ऐतिहासिक पार्टी एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) को गठन भएको छ । केन्द्रीय कमिटीको प्रथम बैठक (३ जेठ) र केन्द्रीय सचिवालयको (७ जेठ) का बैठकले पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा र साङ्गठनिक एकताबारे गरेका महत्वपूर्ण निर्णयहरूको आधारमा १६ जेठ २०७५ मा पार्टीका मातहतका कमिटी, जनसङ्गठन तथा पेसागत सङ्गठनहरूको एकताको कार्यादेशसहित अन्तरपार्टी निर्देशन–१ जारी भएको छ । पार्टीका कमिटी, जनसङ्गठन र नेता कार्यकर्ताले यो एकता प्रक्रियालाई व्यग्रताका साथ पर्खिरहेका छन् । एकता प्रक्रिया र पछिल्लो घटनाक्रम बारेमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा)का नेता सुरेन्द्र पाण्डेसँग गरिएको कुराकानी :-
यो बजेट बनाइरहँदा हाम्रो समाजवाद तर्फको यात्रा के के काम गरेपछि त्यहाँ पुगिन्छ भन्ने छलफल हुनुपथ्यो, त्यो सामुहिक रुपबाट भएन । शव्दले समाजवाद लेखेर समाजवाद आँउदैन नी । हो चाँही के समाजवाद भनेको ? त्यो समाजवाद ल्याउनका लागि के काम गरेपछि समाजवाद आँउछ ? पहिले यो छलफल हुनुपथ्र्याे । दोस्रो, कस्तो कस्तो शिर्षकमा बजेट हाल्नुपथ्र्यो या बजेटको कस्तो किसीमको आकार हुनुपथ्र्यो, बजेटको ओरेन्टेशन के हुनुपथ्यो ? भन्ने कुराको छलफल सामुहिक रुपमा भएन । जसले गर्दा जसरी बजेट आउनुपथ्र्यो भन्ने सांसदहरुको अपेक्षा थियो, या जनताको अपेक्षा थियो, त्यो भएन भन्ने गुनासो सुनेको छु मैले । मेरा पनि कतिपय गुनासाहरु छन् । मैले पनि यो भन्दा अझैं राम्रो गर्न सकिन्थ्यो भन्ने लाग्या छ । यद्यपि त्यो भन्दा बढी अरु मैले केही भनिरहेको छैन । यति पनि गुनासो नआउनेगरी बजेट ल्याउन सकिन्थ्यो । यद्यपि सय प्रतिशत त हुँदैन । दोस्रो किन बढी असन्तुष्टी आएको छ भन्दा मन्त्री हुने मान्छेले चाहे केन्द्रमा होस्, चाहे प्रदेशमा आफ्नो गाँउघर, ठाँउ र आफु चुनाव लडेको ठाँउमा मात्र बजेट हालेको छ । अनि त्यहाँमात्र चुनाव जितेर यो नेकपाको सरकार बन्छ भोली ? नेकपाले फेरी चुनाव जित्छ ?मैले चुनाव लडेको ठाँउमा मात्र मैले बजेट हाल्न उछिन पाछिन र दौडधुप गर्ने अनि अन्त बजेट हालिन भने के हुन्छ ?त्यसले अर्को क्षेत्रको मान्छे त सन्तुष्ट हुँदैन । चुनाव सबैले लडेर आएका छन् । जनताको दवाव र अपेक्षा सबै प्रतिनिधीलाई छ । अनि बजेट हाल्दा त्यो कुराको सन्तुलन नराखिकन बजेट हालियो भने त्यसले असन्तुष्टी बढाँउछ । यो चिज चााही प्रदेशमा पनि देखाप¥यो, माथी पनि देखार्‍पयो ।
० यो खालको कार्यशैली अनि सरकारको अभियानमा सत्तारुढ दलकै सांसदको विरोधले त हाम्रोे समृृद्धिको यात्रा कहाँ पुर्‍याउला ?
यो विरोधको अर्थ सरकारको समग्र विरोध गरिएको होइन । सरकारले अवलम्वन गरेका निर्णय, कार्यशैलि या कतिपय आशिक पक्षको संशोधन र सुधार खाजेको हो । यो सुधार समयमा गर्‍यौं भने भोलीका दिनमा गल्ति हुन पाँउदैन । यो संशोधन र सुधार गरेनौं भने भोली असन्तुष्टी बढ्दै जान्छ, यसलाई त झन सकारत्मक ढंगले ग्रहण गर्नुपर्‍यो । त्रुटी भएको छ भने त्रुटी त सच्याउनु पर्‍यो नी । त्रुटी पनि नसच्याउने अनि तैंले समर्थन मात्रै गर्नुपर्छ भन्यो भने जव भित्रैबाट समर्थन गर्न उसलाई आएन र उसले समर्थन गर्नुपर्ने देखेन भने कसरी समर्थन हुन्छ ? उसले मात्र गरेर भएन । उसको क्षेत्रको जनताले गर्नुप¥यो । जनताले सरकारले ठिक ढंगले सरकारले काम गरेको रहेछ भनेर देखेपछि न अनि त्यो पार्टीलाई समर्थन गर्छ । यहाँका सांसदले मात्र करबल गरेर जनता आफ्नो पक्षमा ल्याउन सकिने हो र ?पहिले त उसको पनि दिलबाट त्यो कुरा आउनुप¥यो । दोस्रो जनताले पनि मेरो सरकार अनि मेरो प्रतिनीधीले ठिक काम गरेको छ भनेर देख्नुपर्‍यो । उ आफैंले समर्थन गर्ने अवस्था सिर्जना हुनुप¥यो नी ।
यो त सही हो । किन यस्तो भइरहेको छ,मलाई त थाहा छैन । त्यसो हुनाले अस्तिको स्थायी कमिटीको बैठकमा सरकारका काम कारवाहीलाई लिएर मात्र एक दिनको स्थायी कमिटीको बैठक बसौं । त्यहाँ भएका सबै गुनासाहरुलाई पनि सुनौं । आलोचना गर्नुपर्ने अवस्था छ भने त्यो पनि गरौं । पार्टीको एकता प्रक्रियालाई पनि तिव्रता दिऔं भन्ने पाटी स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय छ । मलाई लाग्छ त्यो काम हामिले छिटो भन्दा छिटो गर्‍यौं भने यो आइरहेका गुनासो टिप्पणी या कतिपय अवस्था असामञ्जस्य टिप्पणी सच्याएर अघि बढ्न सक्छ ।
हामी घेरावन्दीमा त जहिले पनि छौं नी । हामीलाई कसैले त्यसै टिका लाएर फुलमाला दिएर विजयी बनाइदिएको हो र ? कत्रो मेहनत गरेर, कत्रो एकताबाट, सारा जनताको सक्रियताबाट यो सरकार बनेको हो । हामी केही मान्छेको प्रयासबाट मात्र यो भएको हो र ? यदी हामीले हाम्रो मात्र निजी सामथ्र्यबाट यो भएको हो भनेर गर्व ग¥यौं भने हामी गम्भिर गल्ति गछौं । होइन नी । सारा जनताले सधैं हामीले अस्थिरता देख्यौं, भोग्यौं, काँग्रेसको शासन पनि हेर्‍यौं, विभिन्न किसीमको शासन पनि हे¥यौं, राजाको शासन पनि हे¥यौं, अब कम्युनिष्टहरुको पुर्ण बहुमतको सरकार भयो भने कस्तो हुन्छ भनेर उनीहरुले त्यो आशामा भोट दिएका छन् । र, व्यक्तिलाई मात्र रोजेका पनि होइनन् । म सुरेन्द्र पाण्डेलाई मात्र रुचाएर जिताएको पक्कै होइन । हिजो यसको पाटी सरकारमा हुँदा यसरी काम गरेका छन्, अहिले पनि त्यो राम्रो काम गर्छन् भन्ने आशाले जिताएका छन् जनताले हामीलाई । उनीहरुले मनमोहन सरकारको काम पनि हेरेका छन् । त्यसपछिका विभिन्न बेलामा भएका सरकारका काम पनि हेरेका छन् ।
संसदभन्दा बाहिरबाट यसको समाधान हुनै सक्दैन । म चुनाव लडेर आएको छु, तैले गरिनस् भनेर गालि खाने म । त्यसो भए गोविन्द केसी या कोही व्यक्ति आमरण अनशन गरेर मर्ने भए, काँग्रेसलाई यति सिट, नेकपालाई यति सिट मिलाएर भाग वण्डा गरौं भनेर भनियो भने के हुन्छ ? लोकतन्त्र मर्दैन ? संसदले बनाएको कानुनले देश चल्दैन ? अरु कसैले भनेको आधारमा हुनछ भने भोली चुनाव नै नगरेर त्यत्तिकै सिट बाँडेर टिका लगाए भैगो नी । त्यसो गर्न दिन पक्कै मिल्दैन । मैले भनेको कुरा हुनै पर्छ भन्ने त लोकतन नभई सर्वसत्तावादी कुरा हो । हुनै सक्दैन ।